कस्ता व्यक्तिहरुको यौनजीवन सुखमय हुन्छ ? (जान्नुहोस्) - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
कस्ता व्यक्तिहरुको यौनजीवन सुखमय हुन्छ ? (जान्नुहोस्)
कतिपयको यौन जीवन दुखदायी हुन्छ, कसैको रोमाञ्चक । कसैले यसबाट चरम सन्तुष्ट प्राप्त गरिरहेका हुन्छन्, कसैले असन्तुष्ट । यौनसँग सम्बन्धित धेरै समस्या छन्, हाम्रो समाजमा । यौनजन्य समस्याले नै विकृत रुप लिने हो । कतिपय भन्छन्, ‘मैलें सोचेजस्तो यौन सन्तुष्ट पाइरहेको छैन ।’ कतिपय गुनासो गर्छन्, ‘मेरो पार्टनरले साथ दिएन ।’ कतिपय जिज्ञासा राख्छन्, ‘किन मेरो सिघ्र स्खलन भएको हो ?’
त्यसैले तपाईंपनि यौन जीवन सुखद बनाउनको लागि काम बाँडेर गर्नुहोस् । यसले पार्टनरलाई समान भएको महसुस हुन्छ र तपाईंले उनीहरुको लागि आफ्नो माया र स्नेह देखाउन सक्नुहुन्छ । onlinekhabar बाट